फ्लोरिडा सबैभन्दा संक्रमित छ, हवाई सबैभन्दा घातक अमेरिकी पर्यटन गन्तव्य हो
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » ब्रेकिंग यात्रा समाचार » फ्लोरिडा सबैभन्दा संक्रमित छ, हवाई सबैभन्दा घातक अमेरिकी पर्यटन गन्तव्य हो
एयरलाइन्स • हवाई अड्डा • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • व्यापार यात्रा • सरकारी समाचार • हवाई ताजा समाचार • स्वास्थ्य समाचार • अतिथि सत्कार उद्योग • होटल र रिसोर्टहरू • LGBTQ • समाचार • यात्रा गन्तव्य अपडेट • अहिले प्रचलनमा • संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज
मियामी एयरपोर्ट मा पर्यटकहरु
फ्लोरिडा र हवाई को लागी उडानहरु भरिएका छन् होटलहरु महान गरीरहेछन्। रेस्टुरेन्ट मा लाइनहरु बारम्बार छन्। एक आगन्तुक बिर्सन्छन् उनी साँच्चै COVID-१ heaven स्वर्गमा छन् जब सनशाइन, वा Aloha यस समयमा राज्य।
फ्लोरिडा को एक प्रमुख पर्यटन राज्य मा COVID-१ infection संक्रमण को सबैभन्दा छिटो फैलिएको छ आज २५ 19 १ नयाँ केसहरु वा १२११० केस प्रति लाख जनसंख्या मा। २ people जना मरे वा १.२५ प्रति लाख
हवाई4मरेको वा 2.17 प्रति मिलियन संग सबैभन्दा घातक अमेरिकी पर्यटन राज्य हो। हवाईले 845४५ नयाँ केस वा ५584४ प्रति मिलियन रेकर्ड गरेको छ
हवाई एक हो लोकतान्त्रिक राज्य, फ्लोरिडा ए रिपब्लिकन राज्य.
लाखौं अमेरिकीहरु छुट्टी को लागी हो भन्छन्, .... तर अब?
यदि वास्तवमा एक अमेरिकी राज्य रिपब्लिकन वा डेमोक्रेटिक गभर्नर द्वारा संचालित छ भने यसले COVID भाइरस लाई धेरै फरक पार्दैन।
फ्लोरिडा र हवाई मृत्यु आगन्तुकहरु माया गर्नुहुन्छ?
पर्यटन को लागी एक राज्य खोल्नु पनी एक सूत्र हुन सक्छ कि उच्च कोभिड संक्रमण रेकर्ड गर्न को लागी राज्य लाई खोल्छ। फ्लोरिडा पर्यटन को लागी फराकिलो खुला छ, र यस्तै हवाई छ, खुल्ला हतियार संग आगन्तुकहरुलाई स्वागत।
अमेरिका मा LGBTQ यात्रीहरु को 92% खोप लगाइएको छ। भाग्यशाली दुवै राज्यहरु LGBTQ मैत्री छन्।
दुबै राज्यहरु कोविड १ cases को नयाँ केसहरुमा सबैभन्दा खराब प्रकोप को लागी विगत केहि हप्ताहरु बाट एक अर्का संग प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्, र दुबै राज्यहरु आफ्नो पैसा कमाउने आगन्तुक को उद्योग मा अधिक सार्थक प्रतिबन्ध को लागी कल गर्न अस्वीकार गर्छन्।
तुलना आज को लागी कोभिड १ statistics तथ्या on्क मा आधारित छ र ओवरटाइम छैन।
समय संगै हवाई कुनै राज्य को सबैभन्दा कम COViD-19 संख्या थियो। यस महिनाको शुरुमा यात्रा प्रतिबन्ध र आवश्यकताहरु परिवर्तन भए पछि संख्या सबैभन्दा कम बाट डरलाग्दो भयो।
अप्रिल १,, २०२० मा, यो प्रकाशन हवाई को बारे मा रिपोर्ट एक बन्द थियोकोभिड 19१ infection संक्रमणको संख्या एक दिनमा १०० नाघेको छ। यो हप्ता मात्र हवाई एक दिन मा १२०० नयाँ संक्रमण को नजिक थियो, र पर्यटन बिस्तारै कुनै पनी दृश्यात्मक प्रतिबन्ध संग फस्टाएको छ।
हवाई यस महिना खोप लगाइएका आगन्तुकहरु को लागी, र अक्टोबर २०२० देखि एक नकारात्मक परीक्षण संग आगन्तुकहरु को लागी खोलिएको छ।
हवाई आराम मास्क र रेस्टुरेन्ट, होटल, र अन्य भित्री सेटिंग्स मा सामाजिक दूरी आवश्यकताहरु, र कोभिड फैलिरहेको छ जबकि पर्यटन फस्टाउँदै छ.
फ्लोरिडा धेरै प्रतिबन्धहरु लाई बेवास्ता गर्न बाट टाढा भयो, एक राम्रो यात्रा गन्तव्य को रूप मा विज्ञापन मा राखीयो, र COVID spiking छ।
दुबै राज्य फ्लोरिडा, र हवाई मा समान छ, कि COVID को प्रसार एक सबै समय उच्च मा छ यस समयमा धेरै स्थानीयहरु लाई उनीहरुका घरहरुमा लुक्न डराउँछन्।
जबकि हवाई मा अझै पनी यस समय पर्याप्त अस्पताल बेड छ, फ्लोरिडा मा आपतकालीन कोठा पहिले नै हलवे मा फैलिएको छ।
बितेको हप्तामा, फ्लोरिडा सबै भन्दा कम COVID दरहरु संग सबै ३० राज्यहरु संग संयुक्त गरीएको छ।
दुबै राज्यहरुमा उनीहरुको ५०% भन्दा बढी जनसंख्या पूर्णरुपमा खोप लगाइएको छ, र दुबै राज्यहरुलाई थाहा छ कि खतरनाक संख्या गैर खोप शिविरमा छ।
दुबै राज्यहरु लाई पर्यटन अर्थव्यवस्था को फस्टाउन को लागी आवश्यक छ र 'कडा प्रतिबन्धहरु लाई विचार गर्नुहोस्। हवाई गभर्नर Ige केही थप प्रतीकात्मक प्रतिबन्ध फिर्ता ठाउँ मा राखे। उहाँलाई रेष्टुरेन्टहरु लाई अब आफ्नो ठाउँ को ५०% मात्र बेच्ने आवश्यकता छ।
चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका अझै पनी धेरै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन को लागी बन्द छ, दुबै राज्यहरु आन्तरिक पर्यटकहरुमा निर्भर छन्। युरोपेली यात्री फ्लोरिडामा हराइरहेका छन्, जबकि जापानी, र कोरियालीहरु अब हवाई रेस्टुरेन्ट, पसल, र समुद्र तटहरुमा देखिएका छैनन्।
आन्तरिक पर्यटन तथापि यो घाटा को लागी क्षतिपूर्ति हो र पहिले कहिल्यै जस्तै फस्टाएको छ।
विडम्बना हवाई मा गभर्नर Ige पर्यटकहरु लाई यस समयमा यात्रा गर्न को लागी कुनै आवश्यकता छैन, र हवाई पर्यटन प्राधिकरण हवाई को लागी सकेसम्म असहज बनाउन को लागी कोशिश गरीरहेको थियो। यो सबै मृत्यु कान मा रहन्छ।
अधिकारीहरु द्वारा औचित्य हो कि पर्यटकहरु वास्तव मा स्थानीयहरु संग मिल्दैनन र हाँस्न योग्य छ, र सबैलाई थाहा छ।
हवाई र फ्लोरिडा वास्तव मा हवाई एयरलाइन्स i पछि एक अर्काको नजिक भयोहोनोलुलु बाट ओर्लान्डो सम्म गैर-स्टप उडानहरु ntroduced.
"कथा को बाकी" अझै थाहा छैन। यो परिणाम को बारे मा सोच्न को लागी डरलाग्दो छ, दुर्भाग्यवश, केहि वाक्यहरु पहिले नै भित्ता मा लेखिएका छन्।
यहाँ हवाई मा, ताजा मामिलाहरु को विशाल बहुमत परिवारहरु र गैर पर्यटक सम्बन्धित जमघटहरु बीच समुदाय फैलिएको छ। यदि प्रसार रिसोर्ट बालुवा पर्यटन स्थलहरु मा थियो, हाम्रो छिमेक को सट्टा, पर्यटन एक मुटुको धड्कन मा बन्द गरीएको थियो। हामी सबै औंलाहरु लाई औंल्याउन मन पराउछौं, तर हामी आफैलाई पुलिस गर्दैनौं किनकि अरुलाई औंलाहरु लाई औंल्याउन सजिलो छ
जोआन एनरिकेज-नोगेरा भन्छन्:
अगस्त २,, २०२० ० 17::2021
यो सबै पैसा को बारे मा छ। हवाई पैसा चाहन्छ। मानिसहरु बन्द मा थकित छन् र कुनै पनी बिदा मा बिदा चाहन्छन्। जीवन को कुनै माया छैन।उनको आफ्नै जीवन वा अरु कोहि। यात्रा बन्द गर्नुहोस् घर बस्नुहोस् सामाजिक दूरी, मास्क लगाउनुहोस्, हात धुनुहोस्, स्यानिटाइज गर्नुहोस्, त्यसैले हामी यो मार्फत प्राप्त गर्न सक्छौं र हाम्रो जीवन फिर्ता पाउन सक्छौं। यस स्वार्थी दर वा हकमा हामी जीवन गुमाउन र बिरामी पर्न जाँदैछौं। यो स्थिति सुधार्ने मौका।हवाई र फ्लोरिडा ढोका बन्द गर्न र आफ्नो कार्य सफा गर्न को लागी। मलाई हवाई को स्थानीयहरु को लागी उनीहरुलाई आक्रमण गरीरहेको छ को लागी नराम्रो लाग्छ। सादा लालच
रेमंड कम भन्छन्:
आऊ न पर्वाह गर।
जब खोप लगाइएकाहरु को लागी हवाई को Comimg को लागी परीक्षण बन्द भयो केहि हप्ताहरु मा केसहरु बढ्न थाल्यो खोप लगाइएका मानिसहरु लाई यो घट्दो रेस्टुरेन्ट र होटेलहरुमा ५०% लाई ल्याउने मानिसहरुलाई यो ल्याउन बाट रोक्न को लागी उनीहरुलाई हवाई मा सिक्नु भन्दा पहिले परीक्षण गर्न आवश्यक छ।
«पछिल्लो 1 2